Nabarro iyo xoqitaanno: dawayn ku saleysan sage iyo malab - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »Xargaha iyo xoqitaanka: daawaynta ku saleysan sage iyo malabka - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Nabarrada iyo xoqidda: Daawaynta Malabka iyo Malabka - Caafimaadkaaga hagaaji
Waxaa jira qaabab badan oo loo daweyn karo jeexdinta iyo xoqitaanka iyada oo ku xidhan darnaanta darnaanta dhaawaca. inta badan Markuu dhaawacu yahay mid aan caadi ahayn oo maqaarkuna uu nadiif ahaanyahay, habka bogsashada kaligiis ayaa loo sameeyaa. Si kastaba ha noqotee, si loo dardargeliyo hawshan, waxaan u adeegsan karnaa daaweyn dabiici ah.
Qaar ka mid ah maaddooyinka dabiiciga ah ee ay ka midka yihiin sage iyo malabka waxay leeyihiin aalkolada lidka ku ah dawooyinka lidka-dawooyinka, guryaha ka caawiya ka ilaalinta maqaarka infekshannada. Intaa waxaa sii dheer, maaddooyinkaan waxaa ku jira antioxidant iyo nafaqooyin muhiim ah oo dhiirrigeliya bogsiinta.
ka jeexan xoqistu waa astaamo muujinaya in maqaarku waxyeello gaadhay. Calaamadahaani waxay badanaa keenaan dhiigbax, casaan iyo xanuun. Si kastaba ha noqotee, habka bogsashada badanaa waa mid dhakhso leh oo aan la isku koobi karin.
Nasiib wanaagse, xilligan xaadirka ah waxaa jira xulashooyin badan oo lagu ilaalin karo maqaarka haddii ay jiraan nabarro aan caadi ahayn. Ka baxsan xulashooyinka dawooyinka, waxaa sidoo kale jira dawooyin dabiici ah oo badan oo waxtar badan leh. Arintaani waa tan dawaynta ee ku saleysan sage iyo malabka oo aan u soo jeedineyno inaan ku ogaano halkaan. Daaweyntan dabiiciga ah waxaa caan ku ah dawada loo yaqaan 'antiiseptik' iyo guryaha bogsashada.
Isku darka sage iyo malabka waxay bixiyaan ikhtiyaar dabiici ah oo loogu talagalay in lagu baabi'iyo aagga maqaarka Saameysay sidaa darteedna yareeyaa halista caabuqa. Intaa waxaa sii dheer, daaweyntani waxay ka caawineysaa dejinta xanaaqa iyo yaraynta bararka hareeraha nabarka. Halkan ka eeg iyada oo aan dib loo dhigin maxay yihiin faa'iidooyinka dawadan dabiiciga ah iyo sida loo diyaariyo.
Faa'iidooyinka daaweynta dabiiciga ah ee loo yaqaan 'sage' iyo malabka si loo daaweeyo jeexitaanka iyo xoqitaanka
Isku darka sage iyo malabka waxay siinayaan daawo dabiici ah oo looguna talagalay daweynta goynta iyo xoqida maqaarka.
Faa'iidooyinka sage markay tahay xagga bogsashada iyo xoqitaanka
Thanks to antiiseptik iyo sifooyinka dawooyinka lidka-dawada ah, sage waa mid ka mid ah dhirta daawooyinka ka caawin karta bogsashada jeexdashada iyo xoqitaanka. Sage waxaa loo adeegsaday dawooyinka dabiiciga ah ilaa wakhtiyadii hore, gaar ahaan si looga hortago koritaanka bakteeriyada iyo unugyada kale ee la-yaqaan ee cudurada ku dhaca.
Lagu dabaqi karo dusha sare, sage wuxuu yareeyaa raaxada nabarrada maqaarkama aha oo kaliya yareynta halista infekshannada meelaha la gaarsiiyey, laakiin sidoo kale iyadoo dib loo cusbooneysiinayo unugyada, dib-u-cusboonaysiinta dhiirrigelinta bogsashada wanaagsan.
Beerta malabku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee loo diyaariyo daawooyinka kale. Thanks to antibiyootig, antifungal iyo antiiseptik guryaha, malabku waa ikhtiyaar aad u fiican oo looga hortago laguna daaweeyo cudurada.
Intaa waxaa dheer, Codsiga jirka la mariyo ayaa kor u qaada caafimaadka maqaarka maxaa yeelay malab sidoo kale waxay leedahay sifooyin qoyaan Waxay gacan ka geysaneysaa dib u soo nooleynta unugyada waxyeelada ka soo gaartay dhaawaca. Malabku waxay leedahay guryo debecsan oo kufiican yareynta raaxo darada jeexan iyo xoqista sida cuncunka, gubashada ama xanuunka.
Maqaalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa in aad xiiseyneyso: Daaweynta malabka ee 3 si loo daryeelo caafimaadka neefsashadaada
Diyaarinta dawaynta dabiiciga ah ee leh saliida iyo malabka
Diyaarinta dawadan dabiiciga ah ee lagu daaweeyo jeexitaanka iyo xoqitaanka ayaa ah mid fudud. Intaa waxaa dheer, maaddooyinka way fududahay in la helomaxaa yeelay waxaan ku aragnaa dukaamada waaweyn iyo sidoo kale kuwa daaqa.
Waxa ugu muhiimsan waa in la helo malab 100% dabiici ahmaxaa yeelay noocyada kale ma bixiyaan tayo nafaqo isku mid ah ama guryo isku mid ah.
Ka taxaddar: Ka fogow adeegsiga dawadan haddii gooyntiisa ama xoqitaanku wali furan yihiin. Maskaxda ku hay in dhaawacyada culus ay tahay inuu daaweeyo xirfad yaqaan caafimaad sida ugu dhaqsaha badan. Haddii, eegidda hore, dhaawaca u muuqdo mid culus, raadso daryeel caafimaad deg deg ah.
2 qaadada budada sage budada ama 30 g caleemaha sage la qalajiyey
Qaadooyinka 4 ee malab shinnida dabiiciga ah (60 g)
Dhalada nadiifka ah ee 1
Qaadada alwaax ee 1
Bilowga, haddii aad dooratay caleemaha qallalan, ka shiil ilaa aad ka hesho budo ganaax ah. Hadaad rabto, waxaad weydiin kartaa dhaqtarkaaga inuu ogaado haddii uu leeyahay soosaar budo ah.
Ka dib ku shub budada sage wax ku dhaji dhalo jeermis dilay.
Hadda ku dar qaado oo ah malab oo ku dar qaaddo alwaax ah.
Markuu diyaargarowgu diyaar yahay, dhalada xir oo ku keydi meel qabow, mugdi ah maalin buuxda.
Mar alla markii wakhtigu dhammaado, waxaad bilaabi kartaa isticmaalka sheyga.
Nadiifi aagga nabarka.
Codso xalka daawada loo yaqaan 'sage and cure malab' ee aad ku diyaarsatay duugista si tartiib ah.
U oggolow sheyga inuu ku dhaqmo illaa labaatan daqiiqo.
Mar alla markii wakhtigan uu dhaafo, ku mayr biyo diiran.
Dib u cusboonaysiinta qalliinka laba ilaa saddex jeer maalintii ilaa maqaarku si buuxda u cusboonaado.
Maqaalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa in aad xiiseyneyso: Dhirta cajiibka ah ee 3 si aad u bogsiiso oo u bogsiiso dhaawacaaga
Daawadan miyaad horay ugu haysataa xirmada dawadaada? Hadda oo aad ogtahay sida loo diyaariyo dawadan waxtarka leh, hubi inaad haysid wax ku habboon oo lagu daaweynayo kuwan dhaawac fudud nolol maalmeedka.
Maskaxda ku hay in diyaarinta ayaa la isticmaali karaa hal ama laba bilood haddii aad ku kaydisid qaboojiyaha ama meel kale oo qabow.
6 sifooyinka bogsashada ee sage
Sage waa warshad leh sifooyin badan oo bogsasho leh. Iyadu waa saaxiibo naadir ah oo had iyo jeer ay guriga ku haysato, sababta oo ah waxay yareysaa jacaylka. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/coupures-et-eraflures-un-remede-a-base-de-sauge-et-de-miel/
Dhir, tuubbiile wanaagsan oo kireyste ah
Dhirta dawooyinka ee loo yaqaan '4 dhirta' si dabiici ahaan loo dejiyo calool-xumada